Isticmaalida sheegashooyinka shirkada si looga cowdo wax ku saabsan PPI | FCA PPI Campaign
Jawaabaha degdega ah
PPI oo la sharaxay
Home / Sida looga cowdo PPI / Isticmaalida sheegashooyinka shirkada si looga cowdo wax ku saabsan PPI
Sida loo hubiyo haddii aad lahayd PPI
Sida looga cowdo PPI
Isticmaalida sheegashooyinka shirkada si looga cowdo wax ku saabsan PPI
Waxaad ka caban karto PPI laftaado -- bilaasha ahaan Laakiin soo ogow waxa macnaheedu yahay -- iyo waxa ay kugu tegi doonto -- haddii aad doorato inaad bixiso sheegashooyinka si looga cowdo laftaadu.
Shirkadaha sheegashooyinku inta badan waxay kulla xidhiidhaan dadka fariimo qoraal ah ama wicitaanada telefoonka, oo waxay ka caawiyaan cabashooyinka ku saabsan PPI. Waxay sidoo kale xayaysiin karaan si ay u sheegaan waxay ay bixin karaan.
Shirkadahan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa shirkadaha sheegashooyinka maamulka (CMCs), wax ka qabtaha sheegashooyinka iyo shirkadaha sheegashada.
Xusuuso: haddii aanad u caban adeegbixiyahaaga 29 Ogosto 2019 muddada ay dhacayso, awood uma yeelan doontid inaad lacagta dib uga sheegato PPI -- markaas waa inaad go’aankaaga gaadha si degdeg ah halkii ay ka habsaami lahayd/
Sharciga FCA ee CMCyada.
FCA waxay noqotaa maamulaha CMCyada, ay ku jiraan kuwan ka shaqaynaya adeegyada sheegashooyinka dhaqaale laga bilaabo 1 Abriil 2019.
May dhammaan CMCyada ma doortaan in loo wareejiyo sharciga FCA. Qaar ka mid ah CMCyada waxay doortaan joojinta sheegashooyinka maamulka. Haddii CMC ay ka shaqynayo sheegashooyinkaaga ka hor isbeddel kan, laakiin aanay dooron inay maamusho FCA, waa inay kula soo xidhiidhaa adiga si laguugu sharxo in la sii wado sheegashadaada ka dib 1 Abriil 2019.
Booqo Maamulka sheegashada waxa isbeddelaya wixii macluumaad dheeraad ah.
Kharashka isticmaalka shirkada sheegashada
Shirkadaha sheegashooyinka waxaa laga mamnuucay inay ku soo dalacaan lacag qadin ah laakiin badankoodu ku soo dalacaan khidmad noqon karta 20% (lagu daray VAT)qadar kasta oolacagta dib laguugu soo celiyo PPI gaaga.
khidmada 20% waxay la minco noqon kartaa shirkadda sheegashada £1,000 lagud aray VAT) oo ka baxsan £5,000 lacag celinta, halkii ay ka ahaan lahayd helitaanka lacag celinta buuxda haddii aad cabashada samayso laftaadu.
Haddii aad go’aan ku gaadho inaad isticmaasho shirkadda sheegashada waa inaad akhridaa shuruudaha iyo xaaladaha si feejigan oo hubso inaad fahanto waxa kharashku kugu tegi doono.
Waa inaad sidoo kale hubisaa haddii shirkada sheegashada loogu oggolaaday Diiwaanka Oggolaanshah Dugsiga ee Maamulaha Sheegashooyinka Maamulka ( taas oo qayb ka ah Wasaarada cadaalada_.
Waxaanu sidoo kale bixinaa macluumaad si aanu ku caawino iska ilaali khiyaamada lacag celinta PPI, sida halka aad ku bixiso lacagta qadinka ah ee qofka ka cabanaya wax ku saabsan PPI isagoo ku metelaya laakiin aanay dhab ahaan kuu samayn cabashada adiga.
Wicitaanada aan la rabin ama qoraalada.
Shirkada sheegashooyinka qaarkood way soo wacaan ama waxay u soo diraan (SMS)dadka wixii buluuga ah, si ay u bixiyaan cabshada ku saabsan PPI iyagoo metalaya.
Si loo caawiyo joojinta wicitaanka suuq gaynta aanla doonayn, uga diiwaan geli moobilkaaga ama lambarka telefoonka laynka bilaasha ahaan Adeega Dookha Telefoonka (TPS).
Macluumaadka Xafiiska Guddoomiya (ICO) ayaa haya wax badan oo ku saabsan dhibta wicitaanka iyo fariimaha(linkigu waa dibada), ay ka mid tahay sida looga cowdo.
Ka cabo wax ku saabsan shirkada sheegashooyinka
Waxaad u cabban kartaa Legal Ombudsman I( udoodaha Sharciga ah) haddi aanad ku faraxsanayn adeega aad ka heshayshirkada sheegashada, ay ka mid tahay khidmada ay kugu soo dalaceen ama natiijada sheeagshadaada.
Cabashada u dir Claims Management Regulator (Maamulaha Maamulka Sheegashooyinka) haddii aanad ku faraxsanayn dhaqanka shirkada sheegashada, ay ka mid tahay wicitaanada aan la rabin ama qoraalada, ama haddii aad u malaynayso in aanay ka diiwaangashanayn Diiwaanka Ganacsiga La oggolaaday..
GOV.UK waxay haysaaa waxbadan oo ku saabsan sida looga cowdo wax ku saabsan shirkada sheegashooyinka.
Ma heli kartid jawaabaha aad raadinayso? Booqo Jawaabaha degdegaah bogga ama nala soo xidhiidh.
Ilaalinta caymiska lacag bixinta
PPI oo la sharaxay Sida loo hubiyo haddii aad lahayd PPI Sida looga cowdo PPI PPI waxaydib u celisaa lacagta khiyaadama
Hubi in shirkada sheegashada la ansixiyay
Ka raadi Diiwaank Ganacsiga La oggolyahay
(Maamula Maamulka Sheegashooyinka)